Tababar lagu baraneyey hanaanka sharci qorista iyo farsamooyin kale oo Muqdisho lagu soo gabogabeeyey (Sawirro). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Tababar lagu baraneyey hanaanka sharci qorista iyo farsamooyin kale oo Muqdisho lagu...
Tababar lagu baraneyey hanaanka sharci qorista iyo farsamooyin kale oo Muqdisho lagu soo gabogabeeyey (Sawirro).
Xiritaanka tababar socday 5 maalmmood oo lagu baranayay hanaanka sharci qorista iyo farsamooyin kale oo muhuiim ah, kuna saabsan arrimaha caadaladda, ayaa lagu qabtay Muqdisho, kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, iyaddo loo qabanayay shaqaallaha Wasaaradda cadaaladda iyo kuwa Maamul goboleedyadda dalka.
Qaar ka mida xubnaha matalayay Maamul goboleeydda dalka, ayaa ugu horeyn ka hadalay waxyaabaha ay ka barteen tababrkaan, islamarkaana uga mahad celiyay Wasaaradda Cadaaladda oo u suura galisay in ay ka faa’iideystaan tababar noocaan oo kale ah.
Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan xuseen Xaaji, ayaa sheegay in wasaaradda qorshaheedu yahay tayeynta iyo sare u qaadista shaqaallaha Wasaarada iyo kuwa maamul goboleedyadda.
Dhowaan ayey aheyd markii Wasaaradda Cadaaladda ay heshiis la saxiixatay kuwa maamul goboleedyada, islamarkaan lagu hishiiyay siddii sare loogu qaadi lahaa tayada shaqaallaha Wasaaradaasi, kuwaas oo looga baahanyahay in si waanagsan uga shaqeyaan cadaalada dalka.
Previous articleCabdi-Xaashi oo qaabilay Michael Keating (Sawirro).
Next articleCiidanka Xoogga dalka oo degmadda Galdogob kasoo qabtay Nin Gaalkacyo ku dilay Qof Rayid ah.